ALIKA KELY AMIN'NY ALÀLAN'NY 3 HERINANDRO, ALIKA KELY ARY MITAIZA ALIKA - ALIKA
Alika kely amin'ny alàlan'ny 3 herinandro, alika kely ary mitaiza alika
Sassy ilay Mastiff anglisy
Amin'ny telo herinandro dia mihombo miaraka amin'ny kankana malefaka ireo alika kely ireo (roa herinandro ihany koa dia nopotehina).
Alika goavambe goavambe no miarina ary mandeha an-tongotra 3 herinandro ary afaka manomboka amin'ny sakafo. Ny karazany antonony dia afaka manomboka sakafo amin'ny taona 3.5 ka hatramin'ny 4,5 herinandro. Ny alika miteraka kilalao etsy ankilany dia mbola tsy manana sakafo mbola afaka misosa ihany. Ny karazana kilalao dia tsy afaka manomboka sakafo alohan'ny 4 herinandro, 4.5 ka hatramin'ny 5 herinandro no tondroina.
Telo herinandro, solida VOALOHANY. Kibble voahosotra no tsara indrindra ho an'ny pups amin'ity vanim-potoana ity. Amin'ity tranga manokana ity dia tsy nokarakarain'ny tohodrano ireo alika kely ary nomena holatra. Tonga somary aloha loatra, saingy mendrika ny andramana ny fandinihana ireo toe-javatra.
TSY mandeha tsara ny famahanana, LOL -) Raha milalao amin'ny sakafony izy ireo dia mbola kely loatra ka tsy afaka manomboka. Ny famahanana holatra dia tsy ilaina ary TSY omena torohevitra, raha tsy manana fako ianao dia mila misara-nono aloha, satria tsy mikarakara azy ireo ny reniny. Na raha ritra aloha ny reniny na mikolokolo fako ianao, na ny haben'ny fako dia lehibe fotsiny ho an'i Neny mba hanomezana fahafaham-po anao hanome sakafo azy ireo, fa raha tsy izany dia tsy zavatra atolotra azy io ary heverina ho fiompiana an-tsekoly taloha.
Ny famahanana alika kely dia nampifangaro sakafo alohan'ny hanomanana azy dia hampitovy izany. Alika kely tototry ny sakafo. Mandehandeha ao izy ireo ary mahazo izany manerana ny tavany ary manao zavamaniry tarehy ao. Tamin'ny taon-dasa dia nahalala zanak'alika kely roa aho izay maty teo amin'ny faha-3.5 herinandro, noho ny fifohana rivotra sy nahazo otrikaretina bakteria tao amin'ny havokavony.
Mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 herinandro, miankina amin'ny haben'ny alika alikao, makà kibble alika kely kalitao ary atobohy rano 2 sy kibble 1 ampahany. Ny kibble sasany dia mila rano betsaka kokoa noho ny hafa. Ny kibble dia hihazona ny endriny ary hisoka ny rano. Te hampiasa rano betsaka araka izay tratranao ianao ary hampisondrotra ireo sombin-kibble ary handeha ho malemy be. Omeo ny alikakely ireo sakafo faritra fihinanana, tsy amin'ny faritra misy ny vilany na ny faritra filalaovany . Ny alika kely dia afaka manangona kibble mando ary mihinana azy. Raha tsy vonona hanao izany izy ireo dia tsy vonona hihinana sakafo henjana.
Matetika ny tohodrano iray dia hampahafantatra anao fa tonga ny fotoana hanombohana hanomezana sakafo matsiro ny alikaola rehefa hitanao ny hamerenany ny kibble ho azy ireo. Izy io dia marika azo antoka fa ny kibble voaroboka no tokony hanome sakafo azy ireo. Mihainoa ny toe-pon'ilay tohodrano. Hitako raha manandrana miandry mandritra ny 5 herinandro aho hanisy sakafo matanjaka amin'ny sakafon'izy ireo, dia hokapohin'ilay tohodrano aho anio na roa andro mialoha. Manamafy izany fa marina ny fotoana.
fifangaroana schnauzer shih tzu amidy
Fihetsiketsehana namahana ...
Mazava ho azy fa tsy maintsy mihinana mifandimby aho, angamba mampiasa lovia roa.
Nisitrika izy ireo ary nilomano fa liana kokoa amin'ny milomano ao anaty sakafo izy ireo ary avy eo mifampilona azy avy.
Noraisina tsara ny torohevitra ... ho an'ny fako lehibe, na alika kely, LOL.
Amin'ny 3 herinandro na rehefa manomboka mandeha ny pups ary amin'ny fotoana hanamboaranao faritra misy vilany kely ivelan'ny vata famarana dia asio rano loaka iray. Ny pups dia mila mianatra manondraka rano amin'ny lovia voalohany.
FAMPITANDREMANA: Rehefa manomboka mihinana sakafo alika mafy ny alika ny alikaola, ny ankamaroan'ny fotoana dia MIjanona amin'ny fikarakarana ny vilanin'izy ireo. Noho izany dia tsy te-hanomboka kibble ianao mandra-pahatongan'ny alika kely rehetra hivoaka ny vilany 100% amin'ny fotoana. JEREO NY alika kely fanofanana trano miaraka amin'ny Misty Method . Amin'ny ankabeazan'ny karazany, raha vita tsara, dia amin'ny 3-4 herinandro. Avy eo, rehefa manampy sakafo ianao, indraindray ny pups dia mahazo poop kely na lehibe amin'ny tendrony aoriana miraikitra toy ny lakaoly TSY hidina (antsoina hoe will-knot na dingleberry). Mety hitarika ho amin'ny fahafatesana koa io, araka ny hitantsika isan-taona ihany koa. Mila manamarina isaky ny 12 ora ny vodin-jaza. Ankizy iray tamin'ny herintaona lasa nandeha natory niaraka tamin'ny vodiny natsofoka ary tery nandritra ny alina manontolo, ary nanapoaka ny sisin'ny tsinainy. Maty noho ny aretina mahery io alika kely io.
Aza avela ny zaza hanaoka ny saokanao, na dia folo segondra aza.
Mini doberman miharo Chihuahua
Afaka telo herinandro dia hahazo tavoahangin-tantely iray tavoahangy ny zanak'ondry Mastiff anglisy isak'alina. Androany hariva aho dia nanampy rano niaraka tamin'i Pablum tao anaty tavoahangy.
Mandritra ny telo herinandro sy tapany dia milamina kokoa ny sakafo.
Ity zazakely kely ity dia mankafy tsara ny sakafony, isaky ny sombin-kanina farany!
Nandritra ny telo herinandro sy tapany dia nanomboka nanaisotra ny fanavakavahana ny ronono ary ny rononon'osy ny alika kely.
ARY samy mikoty sy mikoropaka samirery ry yippee!
Alika kely eo am-pandriana
Miaraka amin'ny sakafo matanjaka dia tonga ny kotrana. Ny poopin'ny pups anao dia tokony ho tsara sy mafy orina, tsy mihosin-dra ary tsy fivalanana. Ity dia iray amin'ireo voalohany amin'ny poops maro izay mila diovina.
Nahazoana lalana avy amin'ny MistyTrails Mastiff
fifangaroana retriever mifono fisaka
Aostraliana mpiandry ondry Mix amin'ny sisin-collie
poodle sy ny mpanjaka Charles cavalier Mix